Kuchengetedzwa Kwemhuka muChelmsford, Essex
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Toba) Catalan Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Javanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus)
Zvapupu zvaJehovha zvekuBritain zvakatanga kuvaka hofisi yazvo yebazi pedyo neguta reChelmsford, riri munharaunda yeEssex. Nzvimbo iyi inoyevedza ine marudzi emhuka akasiyana siyana ayo anodzivirirwa nemutemo weUnited Kingdom unonzi Wildlife and Countryside Act 1981. Chii chiri kuitwa neZvapupu zvaJehovha kuti zvichengetedze mhuka pazviri kuvaka?
Vari kuvaka kabhiriji kanopfuura nemadormouse
Vakagadzira tumabhokisi vachibva vatuisa kure nenzvimbo yavaivaka kuitira kuti tupuka twakaita sembeva tunonzi tumahazel dormice tugare. Tumabhokisi utwu vaitwugadzira nemapuranga aibva pamiti yavaitema munzvimbo yavaivaka. Vakagadzirawo mugwagwa unosvika pavaivaka. Nechepamusoro pawo, vakagadzira kabhiriji kuitira kuti tumahazel dormice tukwanise kupfuura tuchienda kumiti iri kune rimwe divi. Kuwedzera pane izvi, Zvapupu zviri kugadziridza heji uye izvi zvinobatsira tumahazel dormice utwu. Gore negore, rimwe divi reheji iyi rinochekererwa panguva inenge isinganyanyowaniki tumhuka utwu. Gore rinenge richitevera racho, vanobva vachekerera rimwe divi kuitira kuti vasanyanya kuvhiringidza panogara twupuka utwu, uye zvinoitawo kuti tuwane zvekudya zvakasiyana-siyana.
Ari kuisa bhokisi rinozogara twupuka tunonzi madormouse
Zvapupu zviri kuchengetedzawo nyoka dzisina uturu dzinonzi natrix natrix, uye madzvinyu madiki asina makumbo anonzi mablindworm. Kuti zvipuka izvi zvisakuvadzwa, vanoongorora nezvemhuka vakazvibvisa pasi pemaroof tiles avainge vaita kuti zvimbogara, ndokubva vanozviisa kunzvimbo yakanga iri kure nepaivakwa kuitira kuti zvisakuvadzwa uye nzvimbo iyi yakatenderedzwa nefenzi. Sezvo zvipuka izvi zvichimboita nguva yazvisingafambi-fambi, zvakagadzirirwa mekuti zvizororere. Zvapupu zvinogara zvichiongorora fenzi yacho kuitira kuti zvipuka izvi zvisapinda munzvimbo iri kuvakwa nekuti zvinogona kukuvadzwa.
Kuti vasazovhiringidza zviremwaremwa pazvinenge zvichifamba usiku, panzvimbo iyi panoshandiswa maLED lamp ayo ane chiedza chisingaendi kure. Anongobaka chete kana panzvimbo yacho pachipfuura mota, uye kana yapfuura anobva adzima, uye izvi zvinoita kuti nguva yakawanda pange paine rima iro rinodiwa nezviremwaremwa. Sezvo zviremwaremwa izvi zvichitsvaga zvekudya muheji yakatenderedza nzvimbo yacho, yakawanda yeheji yacho haisi kuzobviswa, uye pachada kutodyarwa imwe yakawanda. Pane miti yaitofanira kubviswa, saka vanhu vaishanda panzvimbo iyi vakagadzira mabhokisi anogara zviremwaremwa, vachiitira zviya zvinogona kunge zvaiva nematendere akaparadzwa pakatemwa miti.
Kuisa mabhokisi anozogara zviremwaremwa
Zvapupu zviri kuchengetedzawo miti yava nenguva yakareba iripo, uye zviri kuitawo kuti marori anoshandiswa pakuvaka asafambire pedyo nemidzi yemiti iyi. Mumiti iyi munogarawo zviremwaremwa, shiri nezvimwewo zvipuka. Zvapupu zviri kuita zvese izvi kuitira kuti zvichengetedze mhuka dziri muChelmsford.